Pun Hlaing Lifestyle April Ed.
Dear Pun Hlaing Residents,
Welcome to the April edition of Pun Hlaing newsletter.
Like many of you reading this, we have spent the last several days and weeks learning more about the current situation and how it is impacting our world. From this issue, we are givingafew tips you can follow to prepare yourself mentally and physically toagood start and clean slate in the Myanmar New Year.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရဲ့ ဧပြီလသတင်းစာစောင်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လ၊ ရက်တွေအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကို အားလုံးလည်းသိပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုဘဝလေးရရှိစေဖို့အတွက် ပြုလုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ယခုလသတင်းစာစောင်လေးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Welcoming Myanmar New Year with Pun Hlaing Estate
April is the month of Myanmar New Year, also known for the famous water festival ‘Thingyan’ that usually occurs in mid of the month. It is held at full moon during the lunar month of Tagu and the festival goes on for four days.
As part of celebration of the festival, people throw and douse water onto one another to wash sins and to make clear the moral impurities from old year. It is alsoatime of reflection of your past actions;atime to count your blessings and be grateful to your family, friends for their friendship and encouragement.
တန်ခူးလဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်ကူးလ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်ဟာ လူသိများထင်ရှားပါတယ်။ ဧပြီလလယ်မှာ ကျရောက်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟာ ၄ ရက် သို့မဟုတ် ၅ ရက်အထိ ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။
ပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာ လူအများဟာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရေတွေပက်ဖြန်းပြီးတော့ နှစ်ဟောင်းက မကောင်းမှုတွေကို ဆေးကြောပစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူရှိပါတယ်။ ထိုကာလမှာ နှစ်တနှစ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းတဲ့ အရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ကြသလို ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်း ပြုလုပ်ရင်း ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးကြတဲ့ အချိန်အခါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ပျော်ရွှင်မှု၊ သာယာချမ်းမြေ့မှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ပန်းလှိုင်မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
Photo by Discoverydmc
Symbols of Thingyan
Padauk flower (national flower of Myanmar) blossom onceayear in April from rain showering. Once in bloom, the entire tree turns gold overnight. A famous poet named ZawGyi portrayed this flower as ‘blossom only on the day of the month ofayear, how faithful art thou!’
Explore the gorgeous Padauk trees flowering in the estate. It’s one of our favourite times of the year too.
မြန်မာ့ပန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ပန်းပိတောက်ဟာ သင်္ကြန်ချိန်ခါနဲ့ မကွာလှပဲသင်္ကြန်လက်ဆေးမိုးလို့ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ မိုး ရွာသွန်းပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက်ပွင့်တဲ့ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖူးပွင့်ပြီးတာနှင့် သစ်ပင်တစ်ပင်လုံး ညတွင်းချင်း ရွှေဝါရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာ ဇော်ဂျီက ပိတောက်ပန်းကို တနှစ်မှတခါပွင့်သော သစ္စာရှိတဲ့ ပန်းအဖြစ်တင်စားထားခေါ်ဝေါ်ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာထဲမှာလည်း ပိတောက်ပင်များဖူးပွင့်လှပနေပြီမလို့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ရာဝင်းရဲ့ အလှပဆုံးအချိန်လို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Celebration of the Thingyan Festival is incomplete until you get to feast on the seasonal snack, Mont Lone Yay Paw.
This dessert dish consists of round boiled rice balls made from glutinous rice flour, filled with pieces of jaggery or palm sugar, and garnished with fresh coconut shavings. Yummy!!!
နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာ ရိုးရာမုန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ် မပါဝင်ရင် မပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။
မုန့်လုံးရေပေါ်ကို ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဆန်မုန့်ကို လုံးဝန်းတဲ့ အဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လုံးပြီး အထဲမှာ ထန်းညှက်ခဲအပိုင်းလေးကိုထည့် အပေါ်က လတ်ဆတ်တဲ့အုန်းသီးခြစ်လေးတွေကို ဖြူးပြီး အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြုလုပ်ပုံကိုဖော်ပြပါ လင့်ခ် တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Photo by Lwin Pyin News
Prepare New Year with Self Care in Mind
Havingamorning routine is great, but making sure you're starting your day onapositive note is important, too. Showing gratitude, whether it's towards yourself, someone else or something else, can improve your mental health and emotional well-being.
Instead of firing up your social media apps as soon as you wake up, take some time to give yourselfacompliment or to acknowledge something or someone you're grateful for.
မနက်ခင်းပိုင်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအပြင် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေနဲ့ စတင်တာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ရာကိုဖြစ်စေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသခြင်းက ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
မနက်နိုးနိုးချင်း social media များကို အသုံးမပြုခင်မှာ အချိန်ခဏလေးပေးပြီး မိမိကိုယ်ကိုချီးကျူးစကားပြောပေးတာဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့) တစ်စုံတစ်ရာကို အသိအမှတ်ပြု၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားတာလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
ဆောင်ပါးအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပါ လင့်ခ် တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Contacting with nature has been shown to improve psychological health by reducing stress, enhancing mood, and replenishing mental fatigue. While we continue to advise social distancing due to Covid-19, we encourage our Pun Hlaing residents to take advantage and create quality time at our spacious 652 acres lush green golf estate and facilities.
Regular green exercises such as morning walk and cycling are highly recommended if you like to stay in shape, improve feelings of well-being and decrease the stress-related hormones cortisol and adrenalin. Even if it's just 20 minutesaday, can help you cope with stress and improve your overall mental health.
သဘာဝကို ကြည့်ရှုခံစားခြင်းက စိတ်အခြေအနေကို ပြန်လည်ကုစားပေးတာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကြစေနိုင်တာတွေ၊ စိတ်လန်းဆန်းမှုရှိလာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေ အစရှိတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ Covid-19 ကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာ နေနေရပေမယ့်လည်း ၆၅၂ ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းကြီးထဲမှာ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေရဲ့ အလှအပတွေ၊ facilities အပြည့်အစုံရှိမှုတွေကို အသုံးချပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်လေးတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှုပုံစံရရှိဖို့နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ hormones တွေကို လျော့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက် စိမ်းစိုတဲ့ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေရဲ့ အလှတွေကိုခံစားပြီး မနက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်တာ၊ စက်ဘီးစီးတာတွေ ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ တနေ့မှာ လေ့ကျင့်ခန်း မိနစ် ၂၀ စာပြုလုပ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေရုံသာမက စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ခုခုကိုပြီးမြောက် အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ရရှိစေနိုင်တဲ့အပြင် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ဖန်တီးရာမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Eating well-balanced meals full of foods rich in vitamins, minerals and antioxidants can help improve your mood and promote cognitive function.
Order our healthy and nutritious Asian and Western dishes for dine-in or takeaway within the Estate from the Bamboo House and Oasis Bistro.
Bamboo House & Oasis Bistro will open as usual during Thingyan holidays.
လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေအပြည့်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို မျှတစွာသုံးဆောင်ခြင်းက စိတ်အခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အပြင် အစာချေဖျက်နှုန်းကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံမှာ အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဂျုံ၊ ပရိုတင်း နှင့် အဆီတို့ပါဝင်ပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီတွေ၊ သကြားပမာဏများပြားတဲ့ processed food တွေကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းတာကြောင့် သတိပြု ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုက်ညီပြီး အာဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ အာရှနှင့် အနောက်ပိုင်းအစားအစာတွေကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းက Bamboo House သို့မဟုတ် Oasis Bistro တို့မှာ လာရောက်သုံးဆောင်နိုင်သလို၊ ပါဆယ်လည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မှာယူလိုပါက Ext 1522, 01 3687768 သို့မဟုတ် 09407496700 သို့ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Bamboo House နှင့် Oasis Bistro ကို သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်းတွင် ပုံမှန်အချိန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
Country Store will open as usual during Thingyan Holidays.
Country Store ကို သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Please join us at Oasis for Quiz night and show off your general knowledge!
Thursday 8th April 5.30PM
Group sizes 2-5 pax, depending on how many participants we have.
We play six rounds with 10 questions each in different categories.
1st Place - 30,000 mmk Bar Tab
2nd Place - 15,000 mmk Bar Tab
Book at Oasis Bistro or contact philippe@memoriesgroup.com.
Oasis မှာပြုလုပ်မယ့် Quiz night မှာ လာရောက်ပါဝင်လိုက်ပါ။
ဧပြီလ ၈ ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့ ၊ ညနေ ၅:၃၀
အဖွဲ့ - လူဦးရေ ၂ ယောက် မှ ၅ ယောက်အထိ၊ လာရောက်ပါဝင်သူအရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
မတူညီကွဲပြားတဲ့ ကဏ္ဏတခုချင်းစီတိုင်းမှာ မေးခွန်း ၁၀ မျိုး ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ၆ ကြိမ် ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် Bar Tab
ဒုတိယဆု - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် Bar Tab
contact philippe@memoriesgroup.com သို့မဟုတ် Oasis Bistro တွင် ဘိုကင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Whatever version of wellness you’re seeking, there’sashow to get you in better physical and emotional shape. Here are some straightforward training tips and expert motivation to help get back on track, plenty of coaches and nutritionists are available in audio form. Check here.
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ရှိလို့နေပါတယ်။ ထိုနည်းလမ်းတွေထဲကမှ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်း နားထောင်လေ့လာနိုင်တဲ့ audio form လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ လင့်ခ် မှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။
Benefit of Living in A Gated Community
When planning to buyahouse, it's very important to consider the surrounding neighborhood as well as the home itself. If you are someone who fancies havingaquiet life equipped while still having access to all the modern facilities, living in gated communities could be the right choice for you. A gated community isaform ofahousing estate or residential community that is guarded and enclosed within walls or fences. To explore what are the benefits of living inagated community. Read more here.
Give usacall or send us an email if you'd like to explore the possibilities of making Pun Hlaing Estate your home. Hotline: +959 777 229 449 email: punhlaingsales@yomaland.com
အိမ်ဝယ်ဖို့စဥ်းစားတဲ့အခါ အိမ်နဲ့ပတ်သတ်တာတင်မကပဲ နေမယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဥ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခေတ်မီတဲ့ လူနေမှုပုံစံနှင် အဆောက်အအုံ တွေမှာနေထိုင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Gated Community တွေမှာ နေဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ Gated Community ဆိုတာက တံတိုင်းများ သတ်မှတ်ကာရန်ထားပြီး ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ကန့်သတ်မှု ထားရှိတဲ့ လူနေမှုအသိုင်း (သို့) အိမ်ရာဝန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gated Community မှာ နေထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ပိုမိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖော်ပြပါ လင့်ခ် မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Rentingasafe home for your family at Pun Hlaing golf estate
Easter Egg Hunt Day Photo Highlights
Resident Feature : Interview with Yoga Instructor Magdalena Schwarz
"I’m from Poland. I love nature. I like discovering and checking new ways of staying fit, healthy and peaceful. In everyday life and in yoga too, I prefer holistic approach from different perspectives."
- Magdalena Schwarz
"ကျွန်မက သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပိုလန်သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မက အေးအေးချမ်းချမ်း နေရတာကို နှစ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံအသစ်တွေကို ရှာဖွေနေရတာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘ၀ နှင့် ယောဂကျင့်စဉ်တွေမှာလည်း ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကွဲပြားတဲ့ရှုထောင့်တွေနဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ရတာကို ကျွန်မပိုနှစ်သက်တယ်။" လို့ Magdalena Schwarz က ပြောပါတယ်။
ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပါ လင့်ခ် မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။